‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’, सोनिका र दिलीपको जोडी दर्शकलाई मन पर्यो – Annapurna Post News
‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’, सोनिका र दिलीपको जोडी दर्शकलाई मन पर्यो
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on ‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’, सोनिका र दिलीपको जोडी दर्शकलाई मन पर्यो
काठमाडौं । नेपालको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’ को दोस्रो सिजन चलिरहेको छ । शोको लोकप्रियता पनि निकै बढ्दैछ । मोडल सोनिका रोकाया र कोरियोग्राफर दिलीप ओखेडाको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका हुन् । शुक्रबार साँझ ८ बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको छ ।
सोनिका रोकायाको जोडीको नृत्यलाई दर्शक र निर्णायकहरुले मन पराएका छन् । दर्शकहरुले सोनिकाको नृत्यको प्रशंसा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया समेत दिने गरेका छन् । डान्सिङ स्टार्स नेपालको भोटिङ पार्टनरमा खल्ती डिजिटल वालेट रहेको छ ।
प्रतियोगिता यही १२ चैतदेखि हिमालय टिभी एचडीमा हरेक शुक्रबार प्रशारण भइरहेको छ । आफूले मन पराएको जोडीलाई भोट गर्नका लागि खल्ती एप वा वेबसाइटमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ । शोको निर्णायकमा दिलीप रायमाझी, रेनिशा राई र गौरी मल्ल रहनु भएको छ ।
कांग्रेसको विजयी र्यालीमा एमालेको आक्रमण, ६ जना घाइते-वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२७ मा नेपाली कांग्रेसको विजयी र्यालीमा आक्रमण भएको छ । आक्रमणमा परी ६ जना स्थानीय घाइते भएका छन् ।
वडा नम्बर २७ को अध्यक्ष जितेपछि बिहीबार राति कांग्रेसले विजयी उत्सव मनाएको थियो ।सो क्रममा नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारसहितको समूहले ¥यालीमा सहभागीमाथि आक्रमण गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
आक्रमणबाट ५८ वर्षीय नेमा रेशा, ३० वर्षीय आइसा भन्ने मुन्नी खातुन, ४० वर्षीय मलिक नुनिया, १८ वर्षीय मोहमद नुराइन, ४२ वर्षीय मोहमद मियाँ र १९ वर्षीय जाहिर हवारी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उहाँहरु अधिकांशको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
घाइते सबै जनाको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ४ जना उपचारपछि घर फर्किनुभएको छ भने महम्मद मियाँ र आयसा खातुनको नारायणी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।
वडा नम्बर २७ को अध्यक्षमा १५१६ मत ल्याएर कांग्रेसका हृदयनारायण प्रसाद कुर्मी विजयी हुनुभएको थियो ।
नेकपा एमालेका प्रदीपकुमार यादव भन्दा ४०५ मत ल्याएर कुर्मी निर्वाचित हुनुभयो । प्रदिपले १११६ मत पाउनुभयो । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदीप वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
चुनाव जिते भने बालेन यसकारण एमाले बन्छन्
फ्याक्ट चेक : के बालेन साह दम्पतीलाई नै पुत्रीलाभ भएको हो ?
दुर्गा प्रसाईंले पाएको लौरोको वास्तविकता अर्कै, प्रसाईका निकटस्थहरुले नै खाए जिल !
कुलमानको चमत्कारीक काम
June 19, 2022 suja
आज यी स्थानमा चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना